ILufthansa Group irhoxisa zonke iinqwelomoya eziya eChina
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhuseleko loKhenketho noNgxamiseko » ILufthansa Group irhoxisa zonke iinqwelomoya eziya eChina
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Xanduva • Safety • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhuseleko lwabakhweli kunye nabasebenzi yeyona nto iphambili kwiqela laseLufthansa. Emva kokuvavanya ngokupheleleyo lonke ulwazi olukhoyo ngoku kwi intsholongwane ye-CoronaIqela laseLufthansa ligqibe kwelokuba limise iinqwelomoya zalo iLufthansa, i-SWISS kunye neAustria Airlines ukuya / nokusuka kwilizwe lase China kude kube li-9 kuFebruwari ngokukhawuleza. Ukongeza, ukwamkelwa kokubhukishwa kweenqwelomoya ukuya / zisuka (kwilizwekazi) i-China iye yanqunyanyiswa kude kube sekupheleni kukaFebruwari. Ukuhamba ngenqwelomoya ukuya / ukusuka eHong Kong kuya kuqhubeka njengoko bekucwangcisiwe. Inkqubo ye- Iqela leLufthansa iya kuqhubeka ngokubeka iliso kwimeko yentsholongwane ye-corona kwaye inxibelelana nabasemagunyeni abanoxanduva.
ILufthansa, i-SWISS kunye neeAirlines zaseAustria ziya kubhabha ziye kwiindawo zabo kwilizwekazi lase China kwakhona. Oku kwenzelwe ukunika iindwendwe zethu ithuba lokuthatha inqwelomoya ecwangcisiweyo kunye nabasebenzi bethu ukuba babuyele eJamani, eSwitzerland nase-Austria.
Abakhweli abachaphazelekayo abaphethe itikiti elikhutshwe ngaphambi / ngomhla wama-23 kuJanuwari ngenqwelomoya eya / esuka kwilizwekazi lase China phakathi komhla wama-24 kuJanuwari ukuya kumhla wama-29 kuFebruwari, banethuba lokuphinda babhale kwakhona simahla kwinqwelomoya kwindlela yokuqala okanye ukurhoxisa uhambo. Oku kusebenza kubagibeli abanetikiti elikhutshwe yiLufthansa, SWISS okanye iAustria Airlines kunye neenqwelomoya ezinenombolo ye-LH, LX, okanye ye-OS. Uhambo olutsha kufuneka lwenzeke kutshanje nge-30 kaSeptemba 2020.
Iqela laseLufthansa libonelela ngoqhagamshelo lwama-54 rhoqo ngeveki ukusuka eJamani, eSwitzerland naseOstriya ukuya kwilizwekazi laseTshayina. Iindawo ekuyiwa kuzo yiNangjing, Beijing, Shanghai, Shenyang neQingdao. Ngapha koko, iinqwelomoya zeLufthansa Group zibonelela ngoqhakamshelwano lwe-19 ngeveki eHong Kong.